Pill ABORTION - Falls Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda
Ilmo iska soo rididda Daawada (Kiniinka ilmo iska soo ridka)
Ilmo soo rididda dawada (sidoo kale loo yaqaan "kiniinka ilmo soo rididda") waa a ammaan iyo wax ku ool ah habka ilmo soo rididda illaa 9 toddobaad.
Daryeelka Caafimaadka ee kaniisadda Falls waxaan ku isticmaalnaa isku darka 2 daawo si aan uurka u joojinno: Μifepгistоnе iyo Μisоpгostоl
Waxaad fursad u heli doontaa inaad la kulanto barahaaga bukaanka ah si aad ugala hadasho nidaamka iyo dareenkaaga iyo welwelkaaga ballanta ka hor. Shaqaalaheennu waxay halkan u joogaan inay taageeraan oo ay caawiyaan labada bukaan iyo kuwa kula jooga khibradan.
Dhameystirka nidaamka soo rididda dawada lafteeda waxay qaadataa 5-10 daqiiqo oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ka fileysaa inaad ku dhexjirto xaruntayada ballamahaaga 1.5 saacadaha 2 - oo ay ku jiraan diiwaangelinta, waraaqaha, adeegyada shaybaarka, dib u eegista nidaamka iyo ballantaada daryeelka daryeelka ilmo soo rididda dhabta ah.
Ballantaada daryeelka daryeelka ilmo soo rididda ayaa takhtarkayagu ku siin doonaa daawada ugu horreysa, Ifepгistоnе. Tani waxay xannibtaa hormoonka progesterone ee xajiya uurka. Hormoonkan la'aantiis, xuubka endometrial-ka iyo uurka ku soo kordha ayaa ka yaraanaya derbiga minka.
Daawada labaad, Isоpгostоl, oo aad qaadan doontid guriga, waxay ka caawisaa afka ilmagaleenka inuu jilco iyo casiraada makaanka iyo dhiig baxa (sida mudadaada oo kale) wuxuu bilaabaa caawinta ka saarida uurka dhammaaday. Maroojinta iyo dhiigbaxu waa dhexdhexaad ilaa culus.
Xafiiskayaga: Waxaad liqi doontaa kiniinka ugu horreeya. Ma aha wax aan caadi ahayn in waxoogaa dhibco ah ama xitaa dhiig baxa daawada ugu horreysa ka dib, laakiin qalliinku weli ma dhammaystirnayn.
Guriga: Waxaad u qaadan doontaa kiniiniyada 'оisоpгostоl' sidii lagu faray, adigoo ka caawinaya ilmo-galeenka inuu soo ururo oo uu faaruqo. Waxaad kaniiniyadaan qaadan doontaa 12 illaa 48 saacadood kadib, adoo tixgelinaya talooyinka takhtarkaaga iyo jadwalkaaga gaarka ah. Ka dib markaad qaadato Μisоpгostоl waxaad yeelan doontaa dhiig-bax iyo casiraad xoog leh oo laga yaabo inay noqoto mid daran, riwaayad ah ama si fudud ula mid ah mid ka mid ah xilliyadii "xumaa". Tani waxay qaadan kartaa dhowr saacadood.
Suunka kululaynta ayaa kaa caawin kara casiraadyada.
Waxaad dareemi kartaa lallabo, matag, shuban, qandho, dhaxan, ama aad dareento daal. Calaamadahaasi badanaa waxay soconayaan waqti gaaban waxayna iskiis u istaagaan. Qof walba khibradiisa iyo heerarkiisa raaxada way ka duwanaan doonaan.
Waxaa laga yaabaa in dhakhtarkaagu kuu qoro dawo ku saabsan maaraynta xanuunka oo laga buuxiyo farmashiyahaaga.
Daryeelka Kadib: Qorsheyso inaad telefoon kula socotid 2 ilaa 3 toddobaad. Waa aad u muhiim ah bukaanka si ay u sameeyaan baaritaan dabagal ah gaar ahaan haddii astaamaha uurka aysan hoos u dhicin.
Waxaa jira xulashooyin qiimeyntaada dabagalka ah si loo xaqiijiyo inaad si guul leh u cayrisay nudahaaga uurka oo gebi ahaanba aan dib u eegi karno. Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Kiniinka Ilmo iska soo rididda (Ilmo iska soo ridid):
"Ilmo iska soo ridid ​​caafimaad" - fiidiyoow laga soo qaatay Farmashiyaha5in5:
Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad
Fadlan hoos ka eeg Daawooyinka Ilmo iska soo ridka Ilmo soo rididda daryeelka kadib.
Ilmo iska soo ridka Ilmaha
MAXAAD KA FILAN KARAA
Goobta FCHC: Kiniinka Ilmo soo rididda (Μifepгistone), ayaa la qaatay intii laguu ballamay FCHC. Tani waxay sababi kartaa dhiig bax
Guriga: Μisopгostol: U qaado sida lagu faray guriga, xitaa haddii dhiigbax bilaabmay
XUSUUS MUHIIM AH:
Maroojis, dhiig bax iyo / ama dhibco ayaa la filayaa
2 ilaa 48 saacadood kadib markaad takingisopгostol ku qaadato guriga waxaad la kulmi doontaa dhiigbax daran-ilaa-khafiif ah iyo casiraad kordhaysa, oo socon doonta 4-8 saac
Maroojis aad u daran, wax ka badan inta caadiga ah waa caadi, gaar ahaan marka xinjirooyinka iyo unugyada uurka la eryo
Qabow, qandho, lallabbo, matag iyo / ama shuban waa caadi
Dhiigbaxu wuxuu ku yaraanayaa 48 saacadood gudahood. Dhiigbax aan caadi ahayn iyo dhibco ayaa sii socon kara 6-8 toddobaad. Fadlan ka warbixi baraha joogtada ah iyo dhiigbaxa Qiimeyntaada Dabagalka Internetka / Telefoonka
Hoormoonka uurka si tartiib tartiib ah ayuu u yaraadaa, astaamaha uurkuna waxay ku yaraadaan 10-14 maalmood gudahood
Sida loo Maareeyo
4 Isopstol kiniiniyada la bixiyo - U qaado sida uu ku faray dhakhtarkayagu
Xullo waqti aad qarsoodi leedahay, gelitaanka musqusha, oo aad naftaada daryeeli karto
Waxaan kugula talineynaa inaad qaadato ibuprofen-ka miiska lagu iibsado: afar (4) 200mg kiniin ah ka hor qaadashada Isopstol
Waxaad sidoo kale sii wadi kartaa inaad xanuunka ku maareysid ibuprofen miiska lagaa iibsado intaad foorareyso
Xanuun joojiyaha loo qoray ayaa si badbaado leh loogu dari karaa ibuprofen
Xidho suufka maxi - Cab cabitaanno - Si fiican wax u cun - Nasasho
Firfircoonida culus (qaadista culus, jimicsiga) waxay kordhin kartaa dhiigbaxa. Tani waa caadi
Waxaad filan kartaa muddo 4-8 toddobaad gudahood ah ka dib ilmo soo rididdaada.
Caadadaada ugu horreysa waxay noqon kartaa mid culus oo ka sii dheer waxaa kujira xinjiro yaryar oo casiraad ka badan sidii caadiga ahayd
NAGA SOO WAC HADDII AAD KHIBRAD YAHAY
Dhiigbax aad u culus: qooya maxi pad saacad kasta 3 saacadood ama ka badan oo xiriir ah
Matag ama shuban joogto ah 24 saac kadib Isopstol
BUUXINTA QIIMEYNTA AAD SOO SAARAY SADDEX TODDOBAAD KA DIB MAGACAABIDDA QOFKAAGU MAGACAABO:
Khadka tooska ah: tag ṣubuchurchhealthcare.com/follow-up ama Wac 703-532-2500.
Intii lagu gudajiray Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda COVID ee faafa waxay bixisaa Qiimeyn La-Socod Online ah / Telefoon ah.
Kahor Qiimeyntaada Dabagalka dhammeystir kaadida uurka uurka hCG hormoonka lagu siiyay.